Barakace aan isticmaalin baraha bulshada oo loo doortay xildhibaan golaha deegaanka Puntland | allsanaag
Barakace aan isticmaalin baraha bulshada oo loo doortay xildhibaan golaha deegaanka Puntland
Muxsin Cabdullahi Xaaji, oo kamid ahaa dadka barakacayaasha ee ku nool magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa kusoo baxay doorashadii aheyd qof iyo cod ee golaha deegaanka ee dhowaan ka dhacday saddex degmo oo ka tirsan maamulka Puntland.
Muxsin oo ku dhashay deegaanka Qalaafe ee dalka Itoobiya kaddibna waxbarasho u tagay dalka Kenya ayaa shan sanno ka hor yimid magaalada Qardho, halkaasi oo uu ka bilaabay shaqooyin kale duwan oo ay kamid ahaayeen taxsiile iyo macalin carruurta barakacayaasha ah bara diinta iyo maadoyinka kale.
Bishii todobaad ee sannadkan 2021 ayuu ku biiray urur siyaasadeedka KAAH ee uu hoggaamiyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni, kaddib markii uu arkay duruufta heysata dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamamka ku yaalla magaalada iyo metelaad la’aanta ku heysta ururrada siyaasadda ee isku diyaarinayay doorashadii golaha deegaanka. Waxa uu sheegay in markiisii hore uusan fileyn in uu ku guuleysan karayo doorashada balse markii dambe uu dhiirigelin ka helay riyo ahayd in uu doorashada ku guuleysan doono, taa oo sida uu sheegay u rumowday Alle-bari badan kaddib.
“Aniga ma fileyn balse iyada oo doorashada ay ka dhiman tahay dhawr isbuuc baa aniga oo ka fikirahayo doorashada in aan ku soo bixi doono mise waayi doono, baa qoyskii aan la noolaa habeen habeennada ka mid ah waxay igu tiri waxaan ku riyooday adiga oo meeshaas joogo oo iska raaxeysanaya.
“Markii dambana anigana waan abshireystay, waan tukaday. Habeen Jimca ah bey ahayd ilaa iyo dhawr sunno ah baan tukaday, kaddibna waan isa siiyay oo xagga Ilaahey baan ka rajeeyay, ilaaheyna wuu ii hirgeliyay,” ayuu yiri Muxsin.
Muxsin oo hadda kamid ah xildhibaannada golaha deegaanka ee degmada Qardho ayaa sheegay in uusan isticmaalin baraha bulshada, uusana heysan teleefoonnada caaqilka ah ee Smartphones-ka balse waxaa uu rajeynayaa in bishan gudaheeda uu iisbsan doono teleefoon kaddibna uu kusoo biiri doono baraha buslshada.
Balse taas bedelkeeda waxaa uu sameeyay arrin kale oo uu si weyn u xusay in ay ka qeyb-qaadatay guushiisa doorashada isaga oo dhinaca kale aan dafirin muhiimada wanaagsan ee barabaha bulshada maanta ay u leedahay siyaasiyiinta iyo bulshada qeybaheeda kala duwan.
Carruurtii uu macalinka u ahaa waalidiintooda ayuu mid mid ugu tagay kaddibna uu ka codsaday in ay codkooda siiyaan, madaama uu doonayo in uu wax u qabto dadka uu la noolyahay, sidoo kale Muxsi ayaa maalin maalmaha ka mid ah kulan wadajir ah la qaatay waalidiinta halkaasi oo uu sheegay in uu ka helay dhiira-gelin ku aadan ololihiisa doorashada golaha deegaanka.
“Wax badan ayey ii baahnaayeen in aan carruurtooda waxbaro balse annigana waxaan u sheegay in maanta aan uga baahanahay codkooda. Markii hore waxaa ay islahaayeen maanta macalinka ma waxaa uu idin weydiin doonaa lacag mise kaalmo kale base waxaan weydiistay in aan codkooda marti uga ahay oo ay codkooda igu caawiyaan oo aan ahay musharrax u taaggan golaha deegaanka ee degmada, runtii aad ayey iigu raaceen. Halkaasi kuma aan istaagin ee dad kale ayaan u dirin mid kasta oo kamid ah waalidiinta si ay ugu adkeeyaan ballanta” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Muxsin ayaa qorshihiisa koowaad ah in dadka barakacayaasha ah uu ka caawiyo dhinaca guryenta madaama ay ku noolyihiin meel iska yara caddiban oo waxay ku nool yihiin sandaqado, marka qabowgana dhaxan ayey noqdaan, xilliyada kulleelka ahina kuleel ayey isu badalaan, ayuu yiri.
Saddexda urur siyaasadeed waxaa ka sharraxnaa musharraxiin kale oo isaga lamid ah oo hankooda ahaa in ay kusoo baxaan doorashadii taariikhiga aheyd ee ka dhacday degmada Qardho.
Guusha Muxsin ayaa dad badan ka baran doonaan in la guuleysan karo haddii aadan isticmaalin baraha bulshada, inkasta oo ay xusid mudantahay kaalinta baraha bulshada ee dhinca ololaha. Ugu dambeyn maamulka Puntland ayaa lagu ammaanay doorkii ay siiyeen dadka barakacayaasha marka loo eego kuwa codeeyay iyo midka la doortay taas oo dhinaca kale tusaale wanaagsan u noqon doonta maamuladda kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya.
← Guriga Martidda ee Magaaladda Midigale Hargaysa sidy doonaan bay ka yeelayeen →